Kor u kaca qoraalka geesinimada leh | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sare u kaca qoraallada geesinimada leh
Hubaal marar badan, waxaad saacado badan ku qaadatay inaad ka dhex raadiso kumanaanka farood ee jira, si aad u hesho midda ugu habboon ama kan ugu habboon mashruucaaga. Markaad hore u haysatidna waad dabaqaysaa oo maaha sidii aad moodaysay. Tani waxay ku dhacday qaar badan oo naga mid ah. Tani waa sababtoo ah xarfaha aan dooranay ma muujinayaan waxaad rabto inaad ku gudbiso shaqadaada.
Xarfaha, sida midabada, sidoo kale waxay leeyihiin shakhsiyad iyo qaabab kala duwan. Iyadoo ku xiran midka la doortay, hal fariin ama mid kale ayaa la gudbin karaa. Sidaa darteed, qoraalkan Waxaan kaala hadli doonaa farta geesiga ah, halkaas oo aad ku isticmaali karto waxaanan ku siin doonaa qaar ka mid ah qoraalada isku dhafan ee aan waligood dhicin.
1 Maxay tahay ujeedada farta geesiga ah?
2 Guusha qoraalka geesinimada leh
3 Qoraal qoraal ah oo adag, cabbir weyn ama la dhimay
4 Isku-dhafka qoraalka waa inaad ogaataa
4.1 Helvetica Neue iyo Garamond
4.2 Ganacsiga Gothic iyo Sabon
4.3 Courier iyo Montserrat
4.4 Baskerville iyo Akzidenz Grotesk
Maxay tahay ujeedada farta geesiga ah?
Fartu waxay sidoo kale noo soo gudbin kartaa dareenka, sidaas darteed, waa lagama maarmaan ogaanshaha sida loo doorto qaabka ugu habboon ee wax-qorista si aan u daboolno baahideena shaqooyinka. Haddaba, waxa ugu horreeya ee ay tahay in aynu kala saarno waxa aynu doonaynaa in aynu gudbinno, oo ah, dhabnimada, isu-soo dhawaanshaha, casriyaynta, iwm.
Mid ka mid ah isbeddellada naqshadeynta garaafyada, waa isticmaalka xarfaha geesiga ah ama sidoo kale loo yaqaan geesinimo. Kala duwanaanshahan, gudaha jilayaasha, waa kan ugu dhumuc weyn oo ugu wareegsan, kaas oo loo yaqaanno joogto ah.
Farta geesiga ah, waxaan ka heli in ay dhidibka jiifa ayaa ka dhumuc weyn dhidibka toosan kaas oo ku sii hadhsan sidii hore. Xarfaha xarfaha waxay ku fidayaan ballaca, ee ma aha dhererka.
Sida laga yaabo inaad marar badan ku aragtay, markaad soo dejisanayso font, dhammaantood maahan inay leeyihiin kala duwanaanshahan miisaanka, dhammaantoodna geesinimo ma leh. Kala duwanaanshiyahan, haddii aad ka heli doonto, xarfaha ku jira gaar ah akhrinta qoraallada leh cufnaanta dhexdhexaadka ah ama cinwaannada, inkastoo marar badan xeerarkan la jebiyo.
Erayga geesiga ah wuxuu ka yimid dunida Anglo-Saxon, laakiin waxaan horeyba u ognahay inaan runtii jecelnahay ereyga Ingiriisiga, laakiin waa madow nolosha oo dhan.
Guusha qoraalka geesinimada leh
Waad ku mahadsan tahay koritaanka xarfaha, waxay keentay in Qoraalku wuxuu noqday shay aan laga maarmi karin tanna siday ugu wanagsan tahay. Taas macnaheedu maaha in haddii aanad xakamayn farsamada xarfaha aanad ku jirin aduunkan, sidoo kale waxaan leenahay farqiga xitaa haddii aan ku shaqeyno xarfo horay loo qorsheeyay.
Isbeddel kale oo isbeddel ku sameeyay adeegsiga qoraal-qoraalka ayaa ah u janjeedha dhanka nashqadaha ugu yar, maadaama xarfaha ay noqdaan xarunta halabuurka iyo dhammaan indhaha.
Nooca geesinimada leh, oo ay ka weynaadaan waxay yiraahdaan si ka wanaagsan, si ay u soo jiitaan dareenka dadweynaha. The typography, waa qaybta ugu muhiimsan ee naqshadaha astaanta, boodhadhka, boggaga internetka, buug-yaraha, iwm.. taageero kasta. Kuwani waa naqshadaha si fiican loo yaqaan, naqshadaha qoraalka, naqshadeynta halkaasoo fartu ay leedahay dhammaan caannimada halabuurka.
Qoraal qoraal ah oo adag, cabbir weyn ama la dhimay
Mid ka mid ah isbeddellada kor u kacayay, waa adeegsiga qoraallada cabbirrada aad u ballaaran, si shakhsiyadda loo siiyo qoraallada halabuurrada, loogana saaro waxyaabaha ku xeeran. Tani waxay keenaysaa in qoraal-ku-qoris uu noqdo xarunta dareenka dadweynaha.
Ma aha oo kaliya inaan ku arki karno farsamadan boodhadhka, buug-yaraha ama waraaqaha, sidoo kale waxaa loo isticmaalaa abuurista calaamado. Qaar badan calaamaduhu waxay rabaan in warkooda laga qayliyo saqafka sare ee sare, in calaamaddaadu aysan ahayn mid kale oo dadweynaha ah, oo ay ka sarreyso dhammaan tartamayaasha kugu xeeran.
Isticmaalka qoraallada geesinimada leh, waxaan ku arki karnaa taageerooyin aan la tirin karin loo isticmaalo, sida aan ku aragnay boodhadhka, logos, laakiin sidoo kale boggaga internetka ama xitaa buug-yaraha xayeysiinta ama dhacdooyinka.
Naqshadaynta bogga shabakadda, isticmaalka qoraalku waa mid wargelin ah, taas oo ka dhigaysa dhinaca aasaasiga ah ee naqshadeynta. Markaad samaynayso bogga internetka, waa inay caddahay in Qoraalku waa inuu noqdaa mid kooban oo toos ah, marka lagu daro in la akhrin karo marka la akhrinayo.
Qaar ka mid ah naqshadeeyayaasha, labadaba garaafyada iyo shabakada, ku xidhiidho sharci ahaanta qoraallada iyo qoraal-qoraal geesinimo leh iyo cabbirro waaweyn, wax kasta oo ka sarreeya 20 dhibcood. Taasna, waxba ka hadhi maayo iyadoon la arkin ama la akhriyin.
Isku-dhafka qoraalka waa inaad ogaataa
Haddii aad horeba hal tillaabo ugu dhowdahay inaad ku biirto hab-dhaqankan qoraal-qoraaleed geesinimo leh, laakiin aadan aad u caddayn doorashada qoraalka, ha werwerin, waxaanu ku siin doonnaa xoogaa. isku-darka qoraalka si aad ugu guulaysato naqshadahaaga, oo mar dambe ma heli doontid cudur daar aadan u leexan dhinaca mugdiga ah.
Suurtagal maaha in laga hadlo naqshadaynta garaafka iyada oo aan laga hadlin isku darka qoraallada. Oo waa taas, teebabku waxa uu awood u leeyahay in uu kor u qaado nakhshad ama uu gabi ahaanba quusiyo. Sida aan ognahay in aysan sahlanayn in la helo, marar badan, ku guuleysiga isku-darka xarfaha, waxaan kuu keenaynaa dhowr si aan gacanta kuugu soo dhigno, waa go'aankaaga halka aad isticmaali karto farta geesiga ah.
Helvetica Neue iyo Garamond
Waxaan ku bilownay classic weyn, laakiin taasi waa mid ka mid ah isku dhafka font ee sida ugu fiican u shaqeeya, waxaad had iyo jeer ku dhufan doontaa ciddida madaxa. Ma aha mid asal ah, laakiin marar badan waa inaad si ammaan ah u ciyaarsiisaa. Xaaladdan oo kale waxaan soo jeedinaynaa in Helvetica Neue loo isticmaalo cinwaannada iyo Garamond ee qoraalka qoraalka.
Ganacsiga Gothic iyo Sabon
Mid ka mid ah xarfaha xarfaha badbaadada leh ayaa ah Ganacsiga Gothic oo haddii aad isku darto wejiga nooca serif sida Sabon, isku dhafan kaamil ah. Xaaladdan oo kale waxaan kugula talineynaa inaad sameyso lid ku ah qaybta hore. Qoraal leh serifs, Sabon, cinwaanka, iyo sans-serif qoraalka soo socda.
Courier iyo Montserrat
Sida aan kaga hadalnay mid kale oo qoraaladeena ah, waxaa jira dad badan oo jecel nooca wax lagu qoro, waana isbeddel guud. Habka qoraalkan, oo lagu daray Montserrat, ayaa dammaanad qaaday guusha.
Baskerville iyo Akzidenz Grotesk
Isku dhafka guusha, si kasta oo aad u eegto. Nooca Serif sida Baskerville, oo ay weheliso nooca sans-serif sida Akzidenz Grotesk, ka duwanaansho qumman. Isku-dar ah oo aad u isticmaali karto sidaad u aragto inay ku habboon tahay, xaaladdeenna waxaan u isticmaali doonnaa cinwaannada serif, iyo sans-serif qoraalka.
Waxaan joojin doonnaa boqolkiba boqol ee isku-dhafka ah, kumanaan isku-dhafan oo leh xarfo qaab-dhismeedkooda, si aan u jebinno waxa la aasaasay oo aan muuqaal cusub u siinno naqshadaha.
Laga bilaabo halkan waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad isku miidto aduunkan madow, oo bilow abuurista shaqooyin ka qaylinaya saqafka sare ee xarfaha adoo isticmaalaya xarfo adag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Sare u kaca qoraallada geesinimada leh
Sida Loo Sameeyo Sawirada Saamaynta Duotone ee Photoshop
Qaababka Joornaalka Waa inaad Ogaataa